Spanish Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(255 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
Loading ... Spanish nderimwe remarudzi anobhejera pasi rose, asi muna 1812 rotari yekutanga yakarongeka pano. Muna 1977, hurumende yeSpain yakasarudza pamutemo wekubhejera zviri pamutemo. Pakutanga, zvinoshanda chete kubhejera, uko kwakavakirwa pahunyanzvi, uye mu1981 kwakanyoreswa zviri pamutemo michina yemitambo uye zvimwe zvakafanana varaidzo yekubheja. Mukutanga kwema80s vanopfuura gumi nevaviri vanoshanda vakagamuchira rezinesi rekuvhura kasino kuSpain. Zivai kune vashanyi kune yedu yepamhepo yekubhejera dhairekitori kuti nhasi indasitiri yekubhejera yeSpanish iri kuwedzera. Nyika ine anopfuura makumi matanhatu makasino uye ingangoita kota yemiriyoni yemamishini emitambo.
Mu2012 yakatanga kushanda shanduko nyowani dzemitemo, kusanganisira mutemo wevashandisi vepamhepo pamhepo, pamwe nekugadzwa kwezvirango zvekuronga kubhejera zvisiri pamutemo. Mutongi weindasitiri yekubhejera munyika iri Central Office yekugadzirisa kubhejera (Dirección General de Ordenación del Juego). Mabasa makuru eHofisi kuburitswa kwemalayisensi, kudzora mashandiro emakambani ekubhejera, pamwe nekubhadharisa faindi kana zvikaitika zvisiri pamutemo.
Pamberi yeMari kuSpain
Kwenguva yakareba, pakanga pasina mitemo chaiyo inodzora zvinoitwa nemasaiti epamhepo kubhejera kuSpain. Nekudaro, kubvira 2002, hurumende yeSpain yakatanga kufamba munzira yekumisikidza uye kubvumidza zviri pamutemo mawebhusaiti epa kasino. Izvi zvakakonzera kugamuchirwa kwemutemo wakakodzera online kubhejera kuSpain, uyo akazopedzisira aumba hwaro hwevanopa marezenisi.
Mutemo wakatanga kushanda muna Chikumi 2012, uye kubva ipapo vanopfuura makumi manomwe vanobheja vanobvumidzwa. Zvisinei, mitemo yakasimba uye 70% mutero yakasiya vashandi vakawanda kwete mubhizimisi, zvisinei, misika yekubhejera iri muIndaneti munyika iri kuwedzera. Kusvikira nguva pfupi yadarika, online slot michina yairambidzwa muSpain. Asi vatongi vemitemo vakasarudza kuzvichinja, uye pakupera kwaChikunguru 25 Online slots vakagamuchira mwenje girini.
Rwokutanga rwe10 yeSpain Online Online Casino Sites
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuSpain
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuSpain, uye nekupa mhando dzemhando yepamusoro uye dzakachengeteka. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji.
Iwe unogonawo kuverenga kuongororwa kwedu kwepaInternet sites, kuti uzive zvakanakisa kutengeswa kwepaIndaneti, mabhonasi uye zvingororo zvekubhadhara zvinowanikwa kune vatambi vanobva Spai
Tevere mira munzira CasinoToplists vafambi - kune zuva kuSpain nemuzinda wayo wakanaka. Madrid inoseka uye inofadza nenhoroondo yayo, yakashongedzwa zvivakwa, inomanikidza maitiro kuhupenyu. Fans ye yakajeka manzwiro adrenaline vachada dzimba dzemitambo, makirabhu uye makasino epasi!
Chimwe chezvakaitika uye geography yeSpain;
Casino uye Kubhejera:
Kasinasi yepamusoro-soro inobvumidzwa uye yakamhanjera kubhejesa bhizinesi;
Kurasika pamusinoti isarasimwa rakakundikana kana kurasikirwa kunopfuura kudarika, mutero unoderera.
Iyo huru casino yenyika:
Kuvakwa kweLas Vegas Sand - iyo yakaoma ndeye 2022;
Shanu dzeMadrid dzinoonekwa nemakero;
Chokwadi chinofadza pamusoro peSpain nevagari varo.
Nzvimbo yeSpain uye chiitiko chechiitiko chakare
Humambo hweSpain - imwe yeakanakisa, anogamuchira vaenzi uye anodziya Europe.
Zita rayo renhetembo, oddly enough, akatora kubva mururimi rweFenike, uko "i-punks" yakashandurwa se "Beach hyraxes (tsuro)."
Sezviri pachena, pasati paine chaizvo mhuka dzakawanda. Nhasi, Spain - nyika yevanodada varume nevakadzi vakanaka, vane shungu dzehupenyu, kutamba, hunyanzvi uye kushambadzira kunozivikanwa pasi rese.
Guta guru reSpain, Madrid ndiyo nhoroondo inodada yezana ramakore zana. Nhasi, guta guru iri rine vanhu vanopfuura mamirioni matatu, ndiyo runako rwakanyarara rweimba dzekare nedzimba dzehumambo dzakasanganiswa nemigwagwa mikuru yakabatikana, zvitoro zvakawanda, maresitorendi uye makirabhu.
Casinos uye Kubheja muSpain
Spain - nyika isina hanya, inofungidzirwa kuti inoridzwa yega yega kana ingangoita yega yega. VaSpanish vanoda marotari, mitambo yemakadhi, kubheja uye zvechokwadi kasino. Kwegore ra2013 pamutambo wakashandiswa zvinodarika mamirioni gumi emadhora. Mune ino kesi, muvhareji mugari wenyika anoshandisa pamafaro akadaro kutenderedza 10 euros pagore, iri rakakwirira zvakanyanya kupfuura kune dzimwe nyika.
Kubhejera bhizinesi muSpain zviri pamutemo. Paive nenguva apo kodzero nemikana yevatambi uye varidzi vekubhejera zvakakanganiswa zvakanyanya, asi nhasi unoitiswa zviri pamutemo. Muna 2011, yakaitwa kunyoreswa zviri pamutemo maererano nemitemo yeEU. Panguva imwechete pane zvirambidzo zvinoverengeka, semuenzaniso, makasino anogona kungoshanda mumaguta makuru, kunyanya kunze kwemiganhu yeguta. Zera revashanyi - kubva pamakore gumi nemasere. Nzvimbo dzekutamba mitambo dzinofanira kunge dziri pane imwe nhambwe kubva kune imwe neimwe.
mutemo usati wamboonekwa maererano nekurasikirwa kwakaenzana nekasino mukudyara kwakatadza kwakagamuchirwa muna 2013. Pakupera kwegore, kana kurasikirwa kwacho kuchidarika huwandu hwehwindi, inoderedza mutero unobhadharwa. Asi nemutero wemari iwe unofanirwa kubhadhara zvakafanira.
Ehe, mutambo wehupenyu wakanangiswa pakati peguta guru. Madrid iri kudada nemazvo pamusoro pemakasino matatu makuru uye akanaka kwazvo munyika uye kunyangwe Europe.
Iyo yekare uye yakaomesesa kasino mumuzinda weSpain - Casino de Madrid. Chivako chine nhurikidzwa shanu chine tara yedenga chiri paAlcalá Street, 15. Muna 1836, nzvimbo iyi yakavhurwa sechikwata chevapfumi vaida kubheja kuti vashandise nguva yavo. Icho chivakwa ndicho chakanakisa chiratidziro cheiyo Belle Époque, iyo yemukati inochengetedzwawo mune yayo yekutanga dhizaini: chena machena machena, gilding, yakasarudzika kapeti, maketeni nematafura etafura.
Iyo Casino de Madrid yakagadzira gumi nembiri makamuri, akanyatsogadzirirwa chero kubhejera. Pakati pezvimwe zvinhu, vashanyi vanogona kuyemura iyo yepakutanga mifananidzo yevakakurumbira maartist, zvivezwa uye zvekare. Kune dziva rekushambira uye nhabvu yemitambo, sauna, uye maresitorendi akati wandei, pamwe neimba yekuverengera. Restaurant inodhura kwazvo, asi yakakosha. Yakanga iri pano muna 12, yakapfuura yekupedzisira EPT - European Poker Tour, iyo inowanzoitirwa muMonte Carlo. Poker inozivikanwa kwazvo muSpain; tsvaga uye utore chikamu mumutambo we poker (muhombe kana mudiki) panguva yekugara munyika iri nyore kwazvo.
Iyo huru kasino inoonekwa seSpanish Gran Madrid, iri 29 makiromita kuchamhembe kweguta guru. Iresitoreti yakavhurwa muna 1981, nharaunda yayo inovhara 8000 mativi emamirimita, hapana zororo rine anopfuura mazana maviri emuchina uye nzvimbo dzakasiyana siyana.
Iyo chivakwa chine nhurikidzwa nhatu, inogara iyi kasino ndeimwe yeakakura uye akanaka kwazvo muEurope, inogara ichibviswa kushambadzira uye mharidzo. Iyo dhizaini inoitwa muvintage maitiro 50s. Mumwaka wechando wevarume mapfekero kodhi - masutu uye zvisungo. Zvinonakidza kushanyira muresitorendi kanenge chikamu cherwendo, saka akanaka ese akashongedzwa.
Ku maodzanyemba kwepakati peMadrid, ingori makiromita makumi matatu nemashanu kunze kweguta kune imwe ngano Casino - Gran Casino Aranjuez. Iyo yakavhurika zuva nezuva, ichipa vashanyi kwete chete dzakasiyana-siyana dzekubhejera, asiwo mukana wekunakidzwa nemidziyo inonaka muresitorendi, kunakidzwa mu disco kana kujoina yenyika yekunze inotarisa flamenco show.
Euro Vegas mu 2022
Makasino eguta guru haasi iwo chete anozivikanwa dzimba dzokubhejera dziri munzvimbo yega yega yekutandarira. Chirongwa chekupedzisa kuvakwa kwenzvimbo hombe yeLas Vegas Sand, muna 2022 ichishandurwa kuita Euro-Vegas. Iyo purojekiti inosanganisira gumi nembiri yekubatanidza zvivaraidzo zvivakwa, izvo kuwedzera kune kasino zvinosanganisira makamuri ane 12 zviuru slot michina, makamuri emusangano, makamuri ehotera, zvitoro, maresitorendi uye kunyangwe yemitambo
Pakupera kwekuvakwa kweLas Vegas Sand ichave iri hombe kasino muEurope, mutoro wezuva nezuva wakagadzirirwa kugara zvakanaka kwevashanyi zviuru makumi matatu nezvitanhatu. Chiyero chisati chamboitika cheNyika Yekare!
Spain pamepu yeEurope
Museo del Prado. Kero: Paseo del Prado. Magnificent museum iri mune yechivakwa chivakwa, mukati mevaenzi vane mifananidzo yeSpanish, Italian, Dutch neFlemish masters.
Plaza Meya. Kero: Plaza Meya. Iyi yakanaka nzvimbo yeMadrid, iyo inofadza neyakaisvonaka mapurani ensemble.
Royal Palace. Kero: Calle Bailén. Iyo yekare maMoorish fortress ikozvino yave imba yepamutemo uye yakavhurika yekushanyirwa. Makamuri akashongedzwa nemifananidzo yehunyanzvi hwekupenda.
Mambokadzi Cofii Museum. Kero: Calle de Santa Isabel, makumi mashanu nemashanu. Iyi nzvimbo yehunyanzvi yakaunganidza mabasa anofadza kwazvo evapendi vezana ramakumi maviri.
Cibeles Square. Kero: Plaza de la Cibeles. Nzvimbo inoshamisa inokwezva chitubu chezana ramakore reXVIII rine chifananidzo cheCybele - mwarikadzi wembereko.
Chokwadi chinofadza pamusoro peSpanish neSpanish
MuSpain, kupfuura chero imwe nyika muEurope, mabhawa, maresitorendi nemakamuri. Trapeznichat imba pano inenge isingagamuchirwe.
Mavara emureza wenyika anosarudzwa nerukudzo rwekurwisa nzombe: tsvuku - ropa, yero - jecha.
MuSpain yakagamuchira kuroora / kuroora mushure memakumi matatu, uye vana vanotanga - mushure me30-35.
Nyika yakabvumira kuroorana nemadzimai akasiyana-siyana.
Kazhinji kacho kazhinji, zita rechiSpain rechipiri kubva kuna baba naamai.
Zuva rekuwira pasi pemvura muSpain hazviitike.
Iyo iri muIberian Peninsula yakagadzira gitare, musket, muporo, fodya, muchecheti, Navajo webwe uye makushe embudzi.
Spain - nzvimbo yekuzvarwa kwaChupa Chups, chiputira svutu inozivikanwa anozvigadzirira Salvador Dali!
0.1 Pamberi yeMari kuSpain
0.2 Rwokutanga rwe10 yeSpain Online Online Casino Sites
2.1 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuSpain
3 Kubhejera kuSpain
3.0.1 Nzvimbo yeSpain uye chiitiko chechiitiko chakare
3.1 Casinos uye Kubheja muSpain
3.1.0.4 Euro Vegas mu 2022
3.1.1 Spain pamepu yeEurope
3.1.2 Zvitsva zveMadrid
3.1.3 Chokwadi chinofadza pamusoro peSpanish neSpanish